नयाँ दिल्ली, १५ मंसिर । भारतमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि नेपालबाट सबैभन्दा बढी विद्यार्थी आउने गरेका छन् । एक अध्ययन सर्वेक्षणका अनुसार भारतमा अध्ययन गर्न आउने विदेशी राष्ट्रका विद्यार्थीमध्ये नेपाल पहिलो स्थानमा रहेको छ ।
जनकपुरधाम, २२ साउन । प्रदेश नं. २ का सरकारको सिफारिसमा भारतको आन्ध्रप्रदेश श्रिकाकुलमस्थित आदित्य इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी एण्ड मैनेजमेन्ट ले ४२ जना छात्रछात्रालाई पूर्ण छात्रवृति दिने भएको छ ।
वीरगन्ज, १९ साउन । वर्षा तथा बाढीपीडित ५० परिवारलाई आज एक कार्यक्रमवीच राहत सामाग्री वितरण गरिएको छ ।
रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कार्यालय उद्घाटन
राजविराज, १९ असार । राजविराजमा गणतन्त्रवादी नेता रामराजा प्रसाद सिंहको नाममा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार तयारी विकास समितिको कार्यालय स्थापना भएको छ ।
हाजिरी जवाफ विद्यार्थीहरुको बुद्धिलाई तिखार्ने माध्यम हो : प्रदेश प्रमुख कायस्थ
जनकपुरधाम, ८ असार । प्रदेश नं. २ का प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले हाजिरी जवाफ जस्ता कार्यक्रमहरुले विद्यार्थीहरुको बुद्धि तिक्षण हुने बताएका छन् ।
शिक्षा प्राप्त विदेश जानुपर्ने बाध्यता हटाउनुपर्छ : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं, ९ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षा प्राप्त गर्न विदेश जानु पर्ने बाध्यता हटाउनु पर्ने बताएका छन् ।
सामुदायिक विद्यालयको नतिजा सुधारमा जोड
कपिलवस्तु, २२ चैत । जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा सामुदायिक विद्यालयहरुको नतिज खस्कदै गइरहेको छ । नतिजालाई विश्लेषण गरि सुधार गर्नका लागि थप कदम चाल्नुपर्ने बुद्धभूमि नगरपालिकाले जनाएको छ ।
रुचीअनुसारको अध्ययन गर्न पाए सबै बालबालिका सफल : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं, १ माघ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालबालिकालाई रुचीअनुसारको शिक्षा दिनुपर्ने बताएका छन् ।
वीरगन्ज पब्लिक कलेजलाई अर्को ऐतिहासिक सफलता
वीरगन्ज, २० पुस । नेपालकै उत्कृष्ट विजनेश कलेजको रुपमा लगातार एकपछि अर्को अवार्ड प्राप्त गरिरहेको वीरगंज पब्लिक कलेजले अर्को ऐतिहासिक सफलता हात पारेको छ ।
शैक्षिक क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ : मन्त्री बराल
रुपन्देही, २९ मंसिर । प्रदेश नं ५ का सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले शैक्षिक क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउन जरुरी रहेको बताएका छन् ।
विद्यालयमा कुनै प्रकारको राजनीतिक क्रियाकलाप नगर्न सुझाव
वीरगन्ज, १९ मंसिर । सामुदायिक विद्यालयहरुबाट प्रदान भइरहेकको शिक्षाको गुणस्तरीयतामा जोडदिनुपर्ने धारणा वीरगन्ज महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले व्यक्त गरेका छन् ।
बौद्ध र विवेकानन्द विश्वविद्यालयबीच सम्झौता
बुटवल, २९ कार्तिक । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र भारतको स्वामी विवेकानन्द सुभार्ति विश्वविद्यालय, मेरठबीच शैक्षिक कार्यक्रम आदानप्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ ।